Qalabka ugu fiican ee loogu badalo TV-ga Smart TV | Wararka Gadget
Qolka Ignatius | | qalabka, Telefishinada
Teknoolojiyaddu wax badan ayey horumarsaneyd sannadihii la soo dhaafey, oo haddaan loo sheegin dhammaanteen kuwa dhashey inta udhaxeysa 70s-80s. Waqtigaan ugu badan, haddii aysan aheyn dhammaan telefishannada ay iibiyaan waa kuwo caqli badan, waxayna ku hoos jiraan magaca Smart TV. Ka dib dhowr tallaabo oo fudud oo aan sameyn karno TV-gaaga u beddel Smart TV.
Telefishinka noocan ah wuxuu na siiyaa macluumaad deg deg ah oo ku saabsan barnaamijyada hadda laga sii daayo telefishanka, taas oo naga hor istaageysa inaan u adeegsanno taleefanka caanka ah ee caanka ah ama adeegsiga codsi taleefanka gacanta ama kaniiniga ah. Waxay sidoo kale na siinaysaa helitaanka waxyaabo aan dhammaad lahayn iyada oo aanad ka guurin fadhiga, sida Netflix, HBO iyo fiidiyow kale oo ku saabsan adeegyada dalabka.
Laakiin sidoo kale, iyadoo kuxiran qaabka Smart TV, waxaan sidoo kale si toos ah ugu soo bandhigi karnaa waxa ku jira taleefannadeenna casriga ah ama kaniiniga ah telefishanka, kuna habboon marka aan dooneyno inaan ku ciyaarno fiidiyowyo aan ku keydinnay aaladdayada, tusno sawirradii safarkii ugu dambeeyay, dhexsocodka internetka oo ciyaar waxyaabaha kujira ...
Laakiin qof kastaa diyaar uma aha inuu u cusbooneysiiyo telefishankiisa mid cusub, maaddaama tan ay hadda haystaan ​​si fiican u shaqeyso xilliganna aysan ka muuqan wax daal ah. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa ikhtiyaarro kala duwan oo loogu beddelo TV-gii hore TV-ga casriga ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano faa'iidooyinka ay bixiyaan noocan telefishanka.
1 Shuruudaha aasaasiga ah: Isku xirka HDMI
2 Faa'iidooyinka TV-ga Smart-ka ah
3 Waa maxay ikhtiyaaraadka jira ee suuqa?
3.2 Chromecast 2 iyo Chromecast Ultra
3.3 Sanduuqa TV -ga Xiaomi Mi
3.4 Sanduuqyada kale ee set-top-ka
3.5 HDMI ul
3.5.1 Intel Compact Stick
3.6 Ku xir konsol
3.7 Ciyaar buluug ah
3.8 Ku xir kombuyuutar
3.8.1 PC ama Mac
3.9 MHL moobaylka ku habboon
Shuruudaha aasaasiga ah: Isku xirka HDMI
Fiilooyinka HDMI ayaa noo ogolaanaya isugu wada gudbiyaan sawirka iyo dhawaaqa hal fiiloSidaa awgeed, waxay noqotay isku xirka ugu isticmaalka badan telefishannada casriga ah, iyadoo laga tegayo fiilooyinka RCA iyo xoqidda / xoqidda, taas oo aan qaadan oo keliya boosas badan, laakiin sidoo kale si weyn u xaddiday tayada sawirka iyo dhawaqa.
Si TV-gaagii hore loogu beddelo mid caqli badan, waxaad u baahan tahay adabtarada oo u rogaaya calaamadda RCA ama jajabka HDMI. At Amazon waxaan ka heli karnaa qalab fara badan oo nuucaan ah. Halkan waxaa ah xiriiriye kuwa na siiya tayada ugu fiican / qiimaha.
Faa'iidooyinka TV-ga Smart-ka ah
Laakiin telefishanka noocan ahi kaliya noo oggolaan maayo inaan marin u helno waxyaabo badan oo ka kooban qaab filimo iyo taxane ah, laakiin sidoo kale wuxuu na siiyaa marin u helka YouTube halkaas oo aan ka heli karno fiidiyowyo fara badan oo ku saabsan mowduuc kasta. Waxay sidoo kale na siisaa adeegyo macluumaad cimilada, marin u helka khariidadaha Google, kanaalada kartoonada kuwa yaryar, kanaalada wax lagu karsado, wararka tooska ah ...
Intaa waxaa sii dheer, iyadoo kuxiran nooca telefishanka, waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa inaan wicitaanno fiidiyoow ah ku sameyno Skype, sida muuqata moodooyinka isku dhafan kaameradda, oo ku habboon sameynta wicitaan fiidiyoow kooxeed xubnaha kale ee qoyska. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa inaan ku dhageysano buugga ballaaran ee 'Spotify katalog', ikhtiyaar aad u fiican haddii aan telefishankeenna ku xirno isteeriyaha.
Waa maxay ikhtiyaaraadka jira ee suuqa?
Suuqa waxaan ka heli karnaa tiro badan oo xulashooyin ah oo kuu oggolaanaya inaad telefishankeenna hore u rogtid telefishan casri ah. Nidaamkan deegaan, tWaxaan sidoo kale ka heli karnaa halganka caadiga ah Google iyo Apple, maadaama ay kuxirantahay nidaamka deegaanka aad ku baratay, waxay u badan tahay inaad isticmaasho mid ama midka kale.
Haddii aad isticmaasho Mac, iPhone, iPad ama aalad kale oo Apple ah, ikhtiyaarka ugu fiican ee aad ka heli karto suuqa waa Apple TV, maaddaama ay noo oggolaanayso oo keliya in aan u dirno waxyaabaha ku jira qalabkeenna Mac ama IOS ee TV-ga. , laakiin sidoo kale waliba, isdhexgalka nidaamka deegaanka ayaa dhameystiran. Sidoo kale markii la bilaabay jiilka afraad ee Apple TV, Apple waxay ku dartay dukaankeeda app, si aan u qaban karno adeegsiga Apple TV sida haddii ay ahaan lahayd xarun ciyaarta.
Thanks to codsiyada tirada badan ee laga heli karo Apple TV bakhaarkiisa, waxaan isticmaali karnaa codsiyada sida Plex, VLC ama Infuse to ciyaaro filimada ama silsiladaha aan ku keydinay kombuyuutarkeenaAma Mac ama PC. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan marin u helno dhammaan waxyaabaha laga heli karo iTunes, si aan u awoodno inaan kiraysano ama u iibsanno filimada ay Apple noogu soo bandhigto adeeggan.
Netflix, HBO, YouTube iyo kuwo kale ayaa sidoo kale loo heli karaa Apple TV iyo sidoo kale codsiyada kale ee noocan ah si loo awoodo cunno nooc kasta oo ka kooban adigoon guriga ka tegin, goorta iyo meesha aan rabno. Fursadaha intiisa kale ee aan kugu tusinayno qodobkaan si wanaagsan uma wada qabsano nidaamka deegaanka ee Apple, in kasta oo la rakibo arjiga qariibka ah waxaan ka dhigi karnaa isdhexgalka mid aad u yar ama ka yar.
Iibso Apple TV
Chromecast 2 iyo Chromecast Ultra
Google sidoo kale waxay ku biirtay isbeddelka aaladda noocan ah mar dhow, haddii aan barbar dhigno Apple TV, oo ah aalad suuqa ku dhacday jiilkeedii ugu horreeyay 2007. Chromecast waa aalad ay soo saartay Google oo aan kuu oggolaaneyno inaad ka ciyaarto waxyaabaha ku jira adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah ee telefishanka. Waxay ku habboon tahay labadaba macruufka, Android, Windows iyo nidaamka deegaanka ee macOS adoo adeegsanaya biraawsarka Chrome. Waxyaabaha loo diri karo Chromecast Waxay ku egtahay barnaamijyada la taageerayo iyo biraawsarka Chrome.
Chromecast-ka Waxay leedahay qiimo dhan 39 euro, wuxuu u baahan yahay koronto microUSB waana mid aad u fudud in la qaabeeyo. Hadaan doorano qaabka 4k, Ultra, qiimahiisa wuxuu gaarayaa ilaa 79 euro.
Iibso Chromecast 2 / Iibso Chromecast Ultra
Sanduuqa TV -ga Xiaomi Mi
Shirkada Shiinaha ayaa sidoo kale dooneysa inay si buuxda u gasho waxyaabaha ay ka kooban tahay warbaahinta badan ee aan ku isticmaali karno telefishankeena waxayna na siineysaa Xiaomi Mi TV Box, aalad lagu maareeyay Android TV 6,0, isla nidaamka hawlgalka ee qaar badan oo ka mid ah TV-yada casriga ahi imika na siiyaan. Gudaha waxaan ka helnaa 2 GB oo RAM ah, 8 GB oo ah xusuusta gudaha, dekedda USB si loogu xiro waddo adag ama USB stick. Qalabkani wuxuu awood u leeyahay inuu ciyaaro waxyaabaha ku jira 4k oo ah 60 fps dhibaato la'aan.
Sanduuqyada kale ee set-top-ka
Suuqa waxaan ka heli karnaa aalado aad u tiro badan oo noo ogolaanaya inaan galno internetka, aaladaha lagu maamulo nooc ka mid ah Android oo la jaanqaaday is dhexgalka telefishanka, maadaama Nexus Player uu na siiyay, keydinta masaafada. Qalabka noocan ah ayaa laga heli karaa dhammaan qiimaha iyo qeexitaannada, laakiin waa inaad had iyo jeer maskaxda ku haysaa taas wuu xoogeysanayaa dib u habeynta, ka jilicsanaanta iyo dhaqsaha badan, gaar ahaan markaan rabno inaan ku ciyaarno feylasha qaab mkv tusaale ahaan.
Codsiyada aan rakibi karno, iyadoo la tixgelinayo inay tahay Android, waxay leeyihiin marin toos ah Google Play Store, sidaa darteed waxaan ku rakibi karnaa barnaamijyada Netflix, YouTube, Plex, VLC, Spotify iyo sidoo kale codsiyada kala duwan ee ay hawlwadeenadu noo fidiyaan si aan uga isticmaalno waxyaabaha ku jira casriga ama kiniinka.
In kasta oo ay run tahay in Google's Chromecast uu weli ul yahay, haddana waxaan go'aansaday inaan ka sooco kala soocidan maadaama ay tahay mid ka mid ah qalabka bixiya qiimaha ugu tayada fiican suuqa, marka lagu daro inuu ku jiro midka ugu caansan. Laakiin ma aha kan keliya ee la heli karo. Suuqa waan awoodnaa hel qalab aad u tiro badan oo noocaan ah noocyo aad u kala duwan laakiin waxaan kaliya diirada saarayaa inaan ku tuso fursadaha na siinaya qiimaha ugu fiican ee lacagta.
Waad ku mahadsan tahay kombiyuutarkan ku dhex-jira dekedda HDMI, waxaan u isticmaali karnaa Windows 10 telefishankeenna, sidii oo aan ku xirnay PC. Gudaha waxaan ka helnaa processor Intel Atom ah oo leh 2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah. Isku-darka akhristaha kaarka xusuusta, 2 dekedo USB ah codsigana waxaa lagu sameeyaa dekedda microUSB. Sida iska cad waxay sidoo kale leedahay isku xirka Wi-Fi si loogu xiro internetka loona helo waxyaabaha aan u baahanahay marwalba.
Hadda iibso Intel ® Compute Stick - Kombiyuutarka Desktop
Shirkadda Taiwanese waxay sidoo kale suuqa noogu soo bandhigeysaa kumbuyuutar yar oo ku xiraya dekeddayada HDMI. Waxay leedahay laba nooc, mid Windows 10 iyo mid kale oo leh ChromeOS. Tilmaamaheeda waxay aad ugu egyihiin kuwa laga helo Intel Compute Stick, oo leh a Atom processor, 2 GB oo RAM ah, isku xirnaanta Wifi, 2 dekedo USB ah, akhristaha kaarka iyo 32 GB oo ah keyd gudaha ah.
Hadda iibso ASUS Chromebit-B014C leh ChromeOS
Hadda iibso ASUS TS10-B003D oo leh Windows 10
Kani waa mid ka mid ah ulaha ugu raqiisan ee aan ka heli karno suuqa taas oo na siineysa is waafajin ballaaran oo ku saabsan nidaamka deegaanka badankiisa, maadaama ay la jaan qaadi karto borotokoolka Miracast, AirPlay iyo DLNA iyo sidoo kale Windows, Linux, iOS iyo Android.
Hadda iibso Wax alaab ah lama helin.
Ku xir konsol
In muddo ah, qunsuliyaduhu ma noqon oo keliya qalab lagu ciyaaro, laakiin sidoo kale na siiso isku xirnaanta internetka si aad u daawato fiidiyowyada YouTube, ku raaxayso Netflix, u aragto waxyaabaha ku kaydsan kombuyuutarkeena PC ama Mac leh Plex ...
PlayStation-ka Sony waa mid ka mid ah xarumaha ugu badan ee warbaahinta badan ee aan ka heli karno suuqa. Kaliya ma ahan inay na siiso isku xirnaanta sida Smart TV-yada, laakiin sidoo kale sidoo kale waa ciyaar yahan Blu-Ray ah, waxay leedahay codsi Netflix ah oo ku baabba'aya waxyaabaha ku jira barxaddeeda, Spotify, Plex, YouTube iyo boqol codsi oo aad u faa'iido badan.
Farqiga ugu weyn ee aan ka helno PlayStation waa in Xbox One uusan na siinin ciyaaryahan Blu-Ray ah, kaas oo dhigaya xaalado liita oo arrintan la xiriira oo keliya, maadaama ay sidoo kale noo oggolaaneyso inaan ku raaxeysto Netflix, Plex, Spotify, Twitch, Skype … Sidoo kale mahad Windows 10 waan awoodnaa ku dar tiro aad u tiro badan oo ah barnaamijyada caalamiga ah hadda laga heli karo Windows Store.
Ciyaar buluug ah
Ciyaartoyda ugu casrisan ee Blu-Ray, waxay kuxirantahay soo saaraha, waxay na siiyaan ficil ahaan isla xalka isku xirnaanta ee aan hadda ka heli karno qunsuliyadaha casri ah oo aan kor uga faallooday, marka laga reebo suurtagalnimada ku raaxeysiga ciyaaraha. Ciyaaryahan nuucaan ah wuxuu na siiyaa noocyo badan oo codsiyo ah oo aan ku geli karno YouTube, Netflix, Spotify ...
Ku xir kombuyuutar
Mid ka mid ah xalka ugu jaban in aan ka heli karno suuqa waa suurtagalnimada in kumbiyuutar ama laptop lagu xiro telefishankeenna. Waxay kuxirantahay inta sano jir, waxay u egtahay inaanan ubaahnayn inaan soo iibsato adabtarada HDMI ee telefishanka, maaddaama dekedda VGA iyo wax soo saarka kumbuyuutarka aan ku xiri karno fiilooyinka telefishanka HDMI la'aan.
PC ama Mac
In muddo ah hadda, waxaan ka heli karnaa suuqa tiro aad u tiro badan oo kombuyuutarro aasaasi ah, kumbuyuutarro yaryar oo noo oggolaanaya inaan si toos ah ugu xirno dekedda HDMI ee telefishankeenna oo aan ka heli karno waxyaabaha ku jira internetka. sida haddii aan si toos ah uga samaynayno kombuyuutarkayaga, kiiboodh iyo jiir.
Telefishanka Smart TV waa wax aan ka badnayn telefishanka oo marin u leh waxyaabaha ku yaal meel ka baxsan, ha ahaato internetka ama kombuyuutarka ama usb USB ama kaarka xusuusta. Raspberry Pi wuxuu na siiyaa xal dhaqaale oo aad u fiican noocan oo kale ah kiisaska, maaddaama ku darista moduleka Wifi waxaan ka heli karnaa wax kasta oo ku jira shabakadeena iyo dibedda labadaba.
MHL moobaylka ku habboon
Haddii aan ku haysanno aaladda casriga casriga ah ee 'OTG smartphone' qaanadda khaanadda, waan awoodnaa u isticmaal xarun warbaahineed si toos ah ugu xiraya dekedda HDMI ee telefishankeenna oo aan tusno dhammaan shaashadda shaashadda telefishanka.
Maqaalkan waxaan ku tusnay dhammaan xulashooyinka kala duwan ee aan ka heli karno suuqa si aan ugu beddelno telefishankeenna hore, xitaa haddii ay tahay tuubbo, TV-ga caqliga badan. Hadda waxay kuxirantahay dhamaan miisaaniyada aad qorshaynayso inaad bixiso. Habka ugu dhaqaalaha badan waa adigoo kumbiyuutar duug ah ku xira telefishanka, laakiin shaqooyinka la heli karo ayaa ku koobnaan doona qalabka.
Haddaan runtii rabno iswaafajin iyo iswaafajin, ikhtiyaarka ugu fiican waa sanduuqyada set-top-ka ee ay maamusho Android ama HDMI Stick oo ay maamusho Windows 10, maadaama aysan kuu oggolaanayn inaad si dhakhso leh ugu rarto meel kasta oo waliba aad uga faa'iideysato sida inay tahay kombuyuutar, ugu yaraan kiiska usha leh Windows 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Qalabka ugu fiican ee TV-gaaga ka dhigaya Smart TV
Kani wuxuu ahaa Microsoft Surface Mini oo aan suuqa soo gaadhin
Wareegtada faraxsan ayaa dab qabadsiiya